6061 Aluminum 3Oo x 5in Rosin Suxuunta Calan la kululeeyayaasha maamusha culus Duty Rosin Press QALABKA dual xakamaysada kululeeyayaasha kaydadka - Shiinaha DongGuan Aamoon Hardware
Haydarooliga Rosin Press
Herb Furimaha Dagaalka
Vape Pen / kaydadka
L0 Vape qalinka
6061 Aluminum 3Oo x 5in Rosin Suxuunta Calan la kululeeyayaasha maamusha culus Duty Rosin Press QALABKA dual xakamaysada kululeeyayaasha kaydadka
Dhibaatada ugu weyn ee la riixaya rosin waa kharashka qalabka. Haddaanu diyaar u tuuji wax yar oo ah cusbi isticmaalaya straightener timaha a, aad u socoto si ay u leeyihiin in ay qaataan a, anagana yar. Waxaan arkay ku badan oo mashiinada weyn u tagto kun oo dollar, laakiin faqri in wouldn`t badan macno samaynayaan haddii aad ganacsi.
Haddii aad xiisaynayso in soo saaro qaar ka mid ah rosin wanaagsan ee dhalidda weyn oo aad u baahan tahay laba waxyaabood:
Marka riixayo rosin, kulaylka ka yar waxaa loo baahan yahay cadaadis sare, taasoo la micno ah aad awoodid rosin jaraa'id ku dhow qabow, haddii aad leedahay qalabka ku habboon. Laakiin, ogolaanaysaa ul in script halkan. I`m ku saabsan si aan idiin tuso sida aad ka dhigi kartaa adiga kuu gaar ah DIY Rosin Press in ka yar $ 500.
xaq macneheedu, jaraa'id in saxan kartaa 12,000lb cadaadis la gacanta ku heerkulka ee wax-soosaarkooda ugu! Best of dhan, kaliya ayay qaadataa dhowr daqiiqo in la dhiso iyo sida loo isticmaalo.
Let`s u wajihi, adiga oo riixaya Rosin waa habka ugu wanaagsan ee tuuji oo dhan miirka ka cannabis. By isticmaalaya kulaylka iyo cadaadiska soo saaro cusbi ka doogga (arrinta dhirta), qof dhali kartaa qaar ka mid ah cusbi oo tayo sare leh.
Dhibaatada ugu weyn ee la riixaya rosin waa kharashka qalabka. Haddaanu diyaar u tuuji wax yar oo ah cusbi isticmaalaya straightener timaha a , aad u socoto si ay u leeyihiin in ay qaataan a, anagana yar. Waxaan arkay ku badan oo mashiinada weyn u tagto kun oo dollar, laakiin faqri in wouldn`t badan macno samaynayaan haddii aad ganacsi.
Cadaadiska sare - ugu yaraan 500lb in 1,000lb (2+ tons doorbiday)
Heat - 150 ° F 350 ° F (200 ° F doorbidayso)
Marka riixayo rosin, kulaylka ka yar waxaa loo baahan yahay cadaadis sare, taasoo la micno ah aad awoodid rosin jaraa'id ku dhow qabow, haddii aad leedahay qalabka ku habboon. Laakiin, ogolaanaysaa ul in script halkan. I`m ku saabsan si aan idiin tuso how you can make your own DIY Rosin Press for less than $500.
In la dhiso Riigga waxan oo dhan ayaa aad u baahan tahay waa laba waxyaabaha fudud:
Double Rosin Press Kit Suxuunta culus Duty Dual maamusha Box la banki Kul-Rod
6-Ton Haydarooliga Shop Floor Press la Suxuunta Press iyo Meegaarka H
Haddii aan in si lama filaan ah complete weli, ogolaanaysaa gudbo faahfaahin ah ee labada. Sidoo kale habka ugu fiican ee hore riixaya cookies rosin for sare terpenoid wax-soosaarkooda.
A awood jaraa'id lix ton galiyey adag H-jir. Dhismaha Super xoog leh oo fudud hooba leh ay fududahay in la dhigay. Biraha kooxda godad bay leeyihiin in laguu ogolaado in aad la qabsato meel shaqada. Waxa kale oo ka mid ah 2 taarikada jaraa'id, u isticmaalaan! Waxay ilaalin doona taarikada kululaynta aad. Iyada oo miisaanka a total of 60lb, aad si ammaan ah kumbyuutarradeedu kartaa 6 tan oo cadaadis, jidka ka badan waxaad u baahan doontaa.
Heat la kontoroolo Suxuunta Press
0 ° F in 415 ° F daqiiqadii !, Kuwani taarikada waajib culus ay abuuri karaan more kulaylka in ku filan oo u adkeysan ilaa 8000psi. Best of dhan, taargooyinka waxaa lagu kululeeyo si heer kulka saxda ah la sanduuqa ay gacanta ku elektarooniga ah! Waxaad leedahay don`t celiso hareeraha la karkaraya taarikada, ama isticmaalaya toosh dharbaaxo sida qaar ka mid ah macsarada kale ah.
Hadii aad waligaa rosin cadaadisay ka hor, waa in aad fikrad wanaagsan ee waxa la sameeyo iyo sida fudud ay tani tahay in ay isticmaalaan. Dhisidda aad saxaafadda u gaar ah idinka badbaadin doonaa, tan ah ee lacagta caddaanka ah iyo ka shaqeeyaan iyo sidoo haddii aan si fiican macsarada kale ee la double qiimaha badan.
1.Plug iyo ciyaaro 5 "x3" platen qotomiyey. Waxaan u isticmaali 6061 aluminium maxaa yeelay waxa ay iftiin, waa xoog badan yahay, oo uu leeyahay iibsiga kulaylka u fiican, taasoo keenta ma dhibco kulul!
taarikada kulul 2.Dual, labada wadaaga ah zone.This kulaylka kaliya waa design la tijaabiyey, tijaabiyo, oo la xaqiijiyay natiijooyinka fiican in boqolaal ka mid ah xaaladaha. Waxaan baari labada ballaadhan, la dhalidda ka fiican ama tayada on dirato dual.
socodka heerkulka 3.Fully sax ah ka 0-300F raaxo leh. Our oo dhoollatus shidma kulaylka si toos ah tumeen ah, idin siinayo heerkulka platen run saxda ah.
5.Made ku haboon wax jaraa'id Haydarooliga ilaa 20 tan oo la wan 2 "dhexroor ama ka yar.
Sii kordhaya taarikada our si aad u jaraa'id doorashada waa mid fudud sida adkaynaya laba boolal set (furayaasha hex ka mid ah) u gal wankii. Setup qaadataa in ka yar 5 daqiiqo!
6.Reach heerkulka aad la doonayo in wax ka yar 10 daqiiqo waxyaabaha our 500w awood kululaynta kaydadka.
7.The Suxuunta bixin kartaa naftooda saacadaha yar ee isticmaalka gudahood!
xakamaysada Digital banki ayaa laba cunsur kaydadka 500w kululaynta
muhiimka ah Hex Buur taarikada si aad jaraa'id ee doorashada
Hal Sano damaanad Full on your korantada
Cinwaanka: Warehouse, Los Angeles Warehouse, jidka + 3731B San Gabriel River Park, Pico Rivera, CA 90660, USA
6061 Aluminum 3Oo x 5in Suxuunta Rosin yeel ...